Famantarana 15 alaina ho an'ny fifandraisana misy anao - Fifandraisana
Famantarana 15 alaina ho an'ny fifandraisana misy anao
Indraindray dia sarotra ny mahafantatra raha toa ka raisina ho zavatra tsy mendrika ianao amin'ny fiarahanareo…
… Ary indraindray dia miharihary miharihary.
Na izany na tsy izany, raha miahiahy ianao fa tsy mankasitraka anao araka ny tokony ho izy ny namanao dia mety marina ny anao.
Angamba ny namanao dia manondro hatrany ireo ‘famantarana fampitandremana’ na mety niova ny toe-javatra ary mahatsapa ho tsy misy dikany ianao izao.
Izahay eto hanampy anao hizaha izay tena zava-mitranga, ary inona no hatao manaraka.
Ireto misy famantarana 15 fa raisin'ny vadinao ho zava-poana ianao.
1. Tsy manaja anao foana izy ireo.
Ny fanajana dia mihazakazaka amin'ny fifandraisana misy dikany, saingy ny fototra no manisa.
Ny zavatra tsotra toy ny fanekena rehefa nanao zavatra ho azy ireo ianao, na kely aza, dia misy fiovana lehibe amin'ny fahatsapanao ny tenanao sy ny fifandraisana.
Tsotra ‘ Misaotra anao ‘Rehefa nahandro sakafo ianao na nanadio dia toa tsy misy dikany, saingy manambara betsaka momba ny fahatsapan'ny olon-tianao anao izany.
Ny fandraisana anao rehefa manao drafitra dia a mariky ny fanajana . Raha tsy mitranga izany dia famantarana lehibe ny tsy fanajana.
Mazava ho azy fa tsy milaza izahay fa ny mpivady na ny olon-tiana ary ny sakaiza dia mila mandany ny fotoana mifoha tsirairay…
… Fa zava-dehibe ny hahafantaranareo samy izy ny fisian'ny tsirairay avy.
Mifampijery sy mahazo antoka fa samy mahazo aina amin'ny drafitra ianao dia zava-dehibe amin'ny fifandraisana salama.
Raha mikarakara alina miaraka amin'ireo namanao ianao dia tsy tokony hahatsiaro tena ho meloka ianao… fa tokony hampahafantarinao ny olon-tianao.
Manao drafitra amin'ny anaran'ny vadinao? Miresaha amin'izy ireo aloha! Tokony hilaza aminao ny namanao raha toa ka efa nanao sonia anao nandritra ny alina niaraka tamin'ny mpiara-miasa na fiaraha-misakafo amin'ny mpianakavy izy - fahalalam-pomba sy mendrika izany.
Ny fanafoanana ny drafitra amin'ny minitra farany teo koa dia tsia-lehibe eo amin'ny fanajana olona. Raha manao an'io matetika ny mpiara-miasa aminao dia famantarana fa tsy dia mankasitraka anao loatra araka ny tokony ho izy ireo izy ireo.
Indray mandeha na indroa dia takatra - ny zavatra mitranga ivelan'ny fifehezantsika! Saingy, ary eo no ilana ny fanajana, ireo fanovana ireo dia tsy maintsy ampitaina amin'ny olon-kafa.
Tsy mahatonga anao sahirana na kivy raha te hahalala ny zava-mitranga ianao na hoe maninona no tsy maintsy miova tampoka ny drafitrao.
Manantena ianao fa hampahafantarina anao ny fanovana ny drafitra hafa koa, na ny fihaonana amin'ny sefonao izay nofoanana na ny fialantsasatra alina miaraka amin'ireo namana nahemotra.
Raha tsy miezaka ny mampahafantatra anao ny antony manova ny drafitra ny olon-tianao, na manohy manao izany tsy misy antony miharihary, dia raisin'izy ireo ho zava-dehibe ianao amin'ny fiheverana fa tsy hanao tabataba ianao.
2. Tsy mampiditra anao amin'ny fiainany izy ireo ary tsy liana amin'ny fandraisana anjara amin'ny fiainanao.
Mety ho toy ny teboka adaladala ity - mazava ho azy fa tafiditra amin'ny fiainan'ny vadinao ianao.
… Fa, ianao ve tena ?
Azo antoka fa miresaka / mandefa hafatra mandritra ny tontolo andro ianao ary mandany fotoana miaraka, fa ianao kosa dia ampahany amin'ny andro sisa amin'ny androm-piainany?
Miresaka aminao ve izy ireo alohan'ny hanapahany hevitra momba ny fiainany?
Anisan'ny fiarahana amin'ny olona iray ny fanomezana lanja ny fisiany amin'ny fiainanao. Midika izany fa mangataka torohevitra amin'izy ireo, maniry ny hampidirany zavatra, ary hitodika any aminy rehefa mila fanampiana ianao.
Raha tsy manao an'ity ny olon-tianao dia tsy mahita sombin-javatra lehibe amin'ny fiainany ianao.
Tsy milaza izahay fa tokony hihozongozona ny lalanao amin'ny lafiny rehetra amin'ny ataon'ny olon-tianao ianao, fa mahafinaritra ny ampahafantarina anao sy maharaka ny fiainany.
Raha tsy milaza aminao ny zavatra ataony izy ireo na tsy mampiditra anao amin'ny zavatra, dia famantarana izany fa raisin'izy ireo ho zava-dehibe ianao ary angamba tsy mankasitraka anao amin'ny fomba tianao.
Tafiditra amin'ny fiainanao koa ve izy ireo?
Manontany ve izy ireo hoe manao ahoana ny asanao, manao ahoana ny fialambolinao, ary inona no mitranga amin'ireo namanao?
Azo antoka fa tsy mila manana fahalalana akaiky an'i Susan avy amin'ny kaonty sy ny olan'ny fifandraisany izy ireo, fa tokony hahafantatra hoe iza ny namanao, farafaharatsiny!
Ny fifandraisana salama dia misy olona mahaleo tena roa… saingy tsy midika izany fa tokony hisaraka tanteraka ny fiainanao.
ny fomba handao ny fianakavianao ary hanomboka fiainam-baovao
Raha toa ka tsy miezaka mafy ny mpiara-miasa aminao hampiditra anao amin'ny fiainany, ary manosika tsy hiditra ao aminao, dia raisina ho azy ianao ary tsy mankasitraka anao araka ny tokony ho izy ireo.
Tsotra toa izany.
3. Tsy misintona ny lanjany izy ireo.
Mety ho sarotra ity satria maro ny ‘andraikitra’ rehefa miaraka amin'olona ianao.
Eritrereto ny zavatra ataon'izy ireo, ary ahoana no mampitaha an'io amin'ny anjara birikinao.
Eo amin'ny lafiny ara-bola, ohatra, mandoa hofan-trano sy faktiora betsaka noho izy ireo ianao? Hitanao fa mahandro isaky ny alina, na dia ao an-trano aza izy ireo? Iza matetika no manao ny raharaha ao an-trano?
Azo antoka fa efa zatra fahazarana ny mpivady ary olona iray matetika no hikarakara asa iray manokana satria… manao!
Angamba ny olon-tianao dia zatra anao fotsiny mahandro fa mihevitra izy ireo fa mankafy azy ary tsy dia mahita azy io ho olana.
p> Hamarino tsara fa misy mahatsapa ny zavatra amin'ny lafiny sasany. Raha ny 'anjaranao' dia ny mahandro isan'alina, dia tokony mbola handray anjara amin'ny toeran-kafa, amin'ny fanaovana lovia na famoahana ny fako.
Raha misy fizarana andraikitra tsy mitovy na tsy ara-drariny dia mila mieritreritra ny dikan'izany ianao.
Mety ho fanaraha-maso tsy manan-tsiny io na mety ho fambara fa heverin'izy ireo ho ambony noho ianao izy ireo na tsy mila ‘manelingelina’ manampy anao amin'ny zavatra manodidina ny trano izy ireo.
Fanontaniana iray hafa apetraka ihany koa: manohana anao ara-pientanam-po ve izy ireo?
Mety ho sarotra be ny mamaly izany.
Mba hampazava azy mazava tsara - tsy ‘sahirana’ ianao noho ny fanirianao ny saina amin'ny vadinao. Te ho akaiky ary ny fitiavana tsy ataovy clingy ianao na mamoy fo.
Azo antoka fa misy fetra sasany tokony hajaina, saingy tsy tokony hahatsapa mihitsy ianao hoe tsy manan-jo hikarakara.
Ny fifandraisana tsara dia midika hoe mifanatrika eo, mifampikarakara, ary manohana ny vadinao.
Raha mahatsapa ianao fa toa ianao no manome izany rehetra izany ary tsy mahazo valiny firy ianao, dia raisin'ny mpiara-miasa aminao ho tsy misy dikany.
4. Tsy mametraka ny ezaka izy ireo.
Tsy tokony antenainao ny fisakafoana voninkazo sy labozia isan-kariva (na dia ezaka tokony hatao amin'ny fotoana manokana aza no antenaina, marina!), Saingy manampy rehefa manao fihetsika kely isan'andro hampatsiahy anao izany tianao sy tadiavina ianao .
Ny fitiavana sy fiheverana dia ampahany lehibe amin'ny fiarahana amin'ny olona iray ary izany no antenainao farafaharatsiny farafaharatsiny - ary izay mendrika anao.
Ny fitiavana dia tsy zavatra ahazoan'ny olona aina rehetra amin'ny fotoana rehetra, fa lafiny iray tena lehibe eo amin'ny fifandraisana amin'ny olona maro izany.
Misy antony mahatonga ny olona sasany tsy faly maneho na mandray fitiavana , mazava ho azy. Tokony hajaina ireo amin'ny fotoana rehetra.
Raha izany, raha tsy misy ny tena antony ao ambadiky ny tsy fitiavam-pitiavana, dia mety ho famantarana izany fa mandray anao tsy ho zavatra ny vadinao.
Tsy mangataka be loatra ny mihazona tanana matetika miaraka amin'ny olon-tianao matetika, na te ho fihinina rehefa naneho ianao fa ratsy ny andro.
Raha tsy te hifandray akaiky aminao ny mpiara-miasa aminao dia mety hahatsapa ho toy ny tsy miraharaha firy izy ireo, na mety menatra izy ireo raha miaraka aminao imasom-bahoaka.
Mety tsy izany no izy, fa ny fihetsik'izy ireo dia tsy tokony hahatonga anao hieritreritra akory fa mety ho fanazavana izany!
Raha hitanao fa ianao irery no maneho fihetsem-po sy fifandraisana akaiky amin'ny fifandraisanao (ary matetika no lavina na esorina izany) dia mila mandinika tsara ianao na manome lanja anao na tsia ny namanao.
5. Tsy mahatoky anao izy ireo.
Raha namitaka anao ny namanao dia mazava be fa mandray anao tsy misy antony izy ireo.
Ankehitriny, ho an'ny olona marobe, ny vahaolana eo noho eo dia ny famaranana ny raharaha. Na izany aza, fantatray fa tsy mora foana ny mamela ny fifandraisana amin'ny olona tianao ary nanolo-tena ho .
Mamitaka ny olona noho ny antony maro samihafa - nefa tsy misy mitombina na iray aza. Raha fantatrao fa mamitaka anao ny vadinao ary mbola miaraka aminy ianao, dia mila manontany ny antony.
Tsy milaza izahay fa ny fifandraisana toy izao dia tsy mety mandeha, satria afaka izy ireo, saingy mila jerenao ny antony misafidy ny hijanona miaraka amin'ny olona iray efa, na, mamitaka anao.
Raha manambady ianao, manan-janaka, na manana fifamatorana ara-bola amin'izy ireo (toy ny trosa arahin'antoka, kaonty banky iraisana, na orinasa iraisan'ny mpiara-miasa), dia misy ny antony hanandramana mamantatra ny zava-misy.
Raha mijanona amin'ny vadinao, vadinao na mpiara-miasa aminao ianao satria matahotra ny ho irery ianao dia mila mandinika ny nataonao. Mety hahatsapa ianao fa toy ny tsy manan-tsafidy, fa mila mijery ny zavatra tena izy ireo.
Ny sakaizanao dia mety hahatsapa ho toy ny hoe afaka ‘miala’ amin'ny famitahana anao izy ireo satria tsy tena 'voasazy' noho izany, toy ny hoe - tsy misy vokany ny fihetsik'izy ireo.
Amin'ity tranga ity dia manararaotra anao sy ny toetranao tsara izy ireo. Ny vadinao dia tsy mankasitraka anao na manaja anao ary mendrika bebe kokoa noho izany ianao.
Mbola mety misy ny fitiavana be amin'ity karazana fifandraisana ity, saingy karazana fitiavana misy poizina izy io ary tsy mahasalama ny mijanona amin'ny olona izay mitondra anao toy izao.
Raha mieritreritra ianao fa mety mamitaka ny vadinao, saingy tsy fantatrao tsara, dia mbola famantarana izany fa mety horaisina ho zavatra tsy mendrika ianao amin'ny fifandraisanao.
Matahotra ny ho voafitaka amin'ny taho avy amin'ny toerana maro samihafa. Ny olona sasany dia voafitaka taloha ary manahy ny amin'ny hisian'izany indray. Ny sasany mino ny mpisoloky azy ireo mety hamitaka noho ny tsy fandriampahalemana lalina na olan'ny fanoloran-tena .
Ankehitriny, tsy milaza izahay fa tsy mitombina ireo fahatsapana ireo, satria marina izany, saingy tsy mariky ny fifandraisana salama izany.
Raha ny vadinao no mihetsika amin'ny fomba milaza fa mamitaka izy ireo (tena miafina sy manana fananana amin'ny telefaona / solosaina findainy, manjavona tsy misy fanazavana, tsy mamaly anao lava kokoa noho ny mahazatra rehefa mivoaka izy ireo, sns.), azo antoka fa misy zavatra tsy mety!
Tsy midika akory izany fa mamitaka anao izy ireo, saingy tsy mendrika sy misy poizina izany fihetsika izany.
Raha nanasongadina ianao fa izany fihetsika izany dia mahatonga anao tsy mahazo aina ary, na dia matoky azy ireo aza ianao, ireo fihetsika ireo dia mahatonga anao hahatsapa ho tsy mahazo aina na tsy matoky tena, dia tokony hiezaka ny hanampy anao amin'izany izy ireo.
Tsy mila manova tanteraka ny zavatra ataony izy ireo (tokony mbola hahatsapa ho toy ny hoe afaka mandany fotoana amin'ny namana vehivavy, ohatra), saingy mila miaiky izy ireo fa manana fotoan-tsarotra ianao ary miara-miasa aminao hahita vahaolana.
Raha tsy manandrana manamaivana ny fihetseham-ponao izy ireo na manome toky anao amin'ny alàlan'ny fandraisana andraikitra dia araraotina ianao ary ny vadinao dia tsy mandray anao amin'ny fanajana mendrika anao.
6. Izy ireo dia mandray anjara amin'ny, na miteraka, ny fahatokisanao tena ambany.
Raha mijaly amin'ny fiheveran-tena ho ambany ianao dia diniho ny fiantraikan'izany amin'ny vadinao.
Mety ho efa nahatsapa toy izany ianao taloha, fa manontania tena hoe ahoana no anampian'izy ireo anao hiatrika ireo fahatsapana ireo, na raha vao miharatsy izany.
Mety nipoitra ireo olana ireo nandritra ny fiarahanareo, amin'izay dia mila manontany tena ianareo hoe maninona no misy izany.
Amin'ny fifandraisana sasany, ny olona dia afaka mahazo faritany na fifehezana tena, izay afaka mifandray amin'ny fandraisana ho azy ireo mpiara-miasa aminy.
Mazava ho azy fa mahatsapa an'izany ireo mpiara-miasa indraindray ary miala amin'ny fifandraisana. Ho an'ny sasany, ireo fitondran-tena mifehy ireo dia mihalehibe ary lasa sarotra be ny manasaraka ny fifandraisana, na inona na inona manimba na manapoizina azy.
Ao anatin'ireny fifandraisana ireny, ny antoko mifehy dia hitady fomba hametrahana ny mpiara-miasa aminy amin'ny fikasana hanimba ny fahatokisan-tenany ary hahatonga azy ireo hiankina amin'izy ireo.
Ny fomba mahazatra anaovana izany dia ny filazana amin'ny mpiara-miasa aminy fa tsy misy ilana azy sy tsy mahasarika izy ireo ary tsy hahita olon-kafa tia azy ireo mihitsy.
Na mety hilaza amin'izy ireo izy fa tsy misy olon-kafa maniry azy ireo ary tsy misy ilana azy samirery ary tsara vintana ho tian'ny mpiara-miasa aminy.
Izany dia fihetsika mahatsiravina sy manararaotra izay ampiasain'ny olona sasany hamandrihana ny olon-tiany amin'ny fiarahana. Ny mpiara-miasa aminy dia mahatsapa ho toy ny tsy misy lalan-kivoahana ary tsy misy olon-kafa hanaiky na ho tia azy ireo mandrakizay.
Ity dia famantarana iray fa raisina ho zavatra tsy misy dikany ianao eo amin'ny fifandraisanao, ary koa famantarana fanararaotana izay mila mitady lalan-kivoahana.
7. Manodinkodina anao ara-pientanam-po izy ireo.
Ity dia mifandray amin'ny teboka etsy ambony momba ny tsingerin'ny poizina manimba tena.
Raha hitanao fa voahodina ara-pientanam-po amin'ny zavatra ianao dia mila mandinika tsara raha toa ka ao anaty fifandraisana mety.
Mety ho hitanao fa tsy maintsy ataonao foana miala tsiny amin'ny zavatra nolazainao na nataonao , na hoe ianao no mila milefitra foana.
Mety ho zavatra madinidinika izany, toy ny alehanao misakafo hariva, na mety ho olana lehibe kokoa toa ny tsy afaka mandany fotoana amin'ny namana sasany na mivoaka tsy misy ny vadinao.
Toa voafehin'izy ireo ny fifandraisana ary, amin'ny lafiny iray, ianao.
Manapa-kevitra tampoka izy ireo fa tsy te hiaraka aminao ary manery fisarahana. Izy ireo ihany koa no hanapa-kevitra rehefa te hiaraka aminao izy ireo.
Hotohizany ianao avy eo haminavina hoe 'azo antoka' ianao na tsia ary hahita fomba hitazomana anao izy ireo - manome torolàlana izay tokony 'hijerenao ny fitondran-tenanao' na hanome azy ireo 'toerana kely.'
Raha misy endrika fanodikodinam-pihetseham-po amin'ny fifandraisanao dia mila manontany tena ianao hoe maninona ianao no mahazaka izany - na hoe maninona ianao no matahotra be loatra mametraka izany ho olana.
Tsy fitondran-tena mahasalama izany ary tsy tokony ho anao velively. Misy foana ny fomba miala amin'ireo karazana fifandraisana ireo, ary ho hitanao hatrany ny fanampiana ilainao.
8. Niova ny haavon'ny firaisana ara-nofo - na amin'ny fomba ahoana.
Famantarana iray hafa tokony hotadiavina dia ny fiovan'ny firaisana ara-nofo. Afaka mandeha na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana, saingy misy zavatra vitsivitsy tokony homarihina raha raisina ho zava-dehibe.
Raha toa te-hanao firaisana aminao kokoa ny vadinao, fa tsy manome anao firaisana ara-pihetseham-po, dia mety manararaotra anao izy ireo.
Mety tsy vonona ny hizara na inona na inona aminao izy ireo amin'ny resaka fahatsapana sy fitiavana, izay famantarana fa tsy dia salama ara-pahasalamana araka ny tokony ho izy ny fifandraisana.
Tsy tokony hatao izay hahatsapanao ho toy ny hoe ‘mitrosa’ amin'ny namanao ianao, indrindra raha ny resaka firaisana ara-nofo amin'izy ireo.
Raha ataon'izy ireo hahatsapa ho toy ny mila manao firaisana amin'izy ireo ianao mba hahazoanao fiheverana na fitiavana, dia mila mandinika ianao hoe nanao ahoana ny toe-javatra.
Ny namanao dia tsy tokony hampisalasala anao amin'ny maha olona anao, na hahatonga anao hieritreritra ny hampiasa ny firaisana ho toy ny ‘vola’ hifandraisana ara-pientanam-po.
Tsy tokony hahatsapa ho terena na teritery amin'ny zavatra ara-batana mihitsy ianao. Tokony ho fomba iray hizarana ny fatoranao fa tsy chip varotra satria te hahatsapa ho akaiky azy ireo ianao.
Raha ny mifanohitra amin'izay no mitranga ary tsy miara-miasa aminao ara-batana intsony ny vadinao rehefa taloha, dia mila manontany tena ianao hoe maninona no mitranga izany.
Ny fifandraisana dia manan-danja amin'ny fifandraisana, indrindra amin'ny resaka firaisana ara-nofo satria mety ho lasa olana lehibe ho an'ny olona sasany izy io.
9. Tsy ianao no laharam-pahamehan'izy ireo.
Fa manantena ny ho anao izy ireo.
Na dia tsy afaka ny ho zavatra maneritery foana amin'ny fiainany aza ianao, dia tokony ho lohalaharana amin'ny lisitry ny laharam-pahamehany matetika kokoa noho ny tsy.
Raha toa ka mametraka zavatra hafa sy olona hafa eo alohanao tsy tapaka izy ireo dia tsy hahatsapa ho tsara loatra izany.
Angamba mandika ny toky nomeny izy ireo fa ho eo ho anao amin'ny hetsika iray manan-danja amin'ny fianakaviana. Na manadino ireo fanoloran-tena hafa efa nataonao tao anaty diary nandritra ny taona maro izy ireo.
Ity dia famantarana fa nametraka lanja lehibe kokoa amin'ny zavatra hafa izy ireo noho ny aminao sy ny drafitra niarahanareo nanao.
Matetika ve izy ireo no tara any am-piasana matetika kokoa noho ny mety?
Azo antoka fa mety mila maka seza aoriana ianao raha toa ka manana daty tena manandanja tena ilaina izy ireo, fa raha mihinana ny sakafo hariva fotsiny ianao amin'ny alina be dia be, dia ataon'izy ireo alohan'ny fifandraisanareo.
Sa mandatsaka drafitra miaraka aminao izy ireo rehefa miantso ny iray amin'ireo namany ary milaza amin'izy ireo fa manana tapakila amin'ny lalao baolina kitra farany izy ireo?
Eny, tsara ny mitazona finamanana matanjaka na dia ao anaty fifandraisana aza, fa raha tsy lavin'izy ireo mihitsy ny fahafaha-manao zavatra tsy misy anao dia mila manontany tena ianao hoe maninona.
Ny marina, ny fifandraisana tsara dia misy sorona sasantsasany.
Mazava ho azy, raha mitodika amin'ireo latabatra ianao ary mihetsika amin'ny fomba toy izany amin'izy ireo, dia ho tezitra izy ireo ary mety handà tsy hamela anao handao azy ireo na hampandoavinao izany rehefa avy eo.
10. Tsy mihevitra ny fihetseham-ponao izy ireo.
Isika rehetra dia manao fahadisoana indraindray ary ireo lesoka ireo indraindray dia mety hiteraka ratram-po amin'ireo izay lazaintsika fa tiantsika.
Miankina amin'ny toe-javatra misy, matetika dia azo avela ireto slip-ups ireto.
Nefa ve ny vadinao tsy miraharaha ny fihetseham-ponao matetika?
Mihetsika amin'ny fomba mahasosotra anao ve izy ireo nefa tsy mieritreritra ny zavatra ataony?
Angamba izy ireo maneso anao amin'ny manodidina ny hafa. Na lazain'izy ireo aminao ny zava-drehetra momba ny androny ary avy eo mandeha manao zavatra hafa nefa tsy manontany ny momba anao.
Tsy voatery hanao izany zavatra izany amin'ny lolompo izy ireo, saingy voafonja ao amin'ny tontolo keliny manokana izy ireo ka zara raha manome hevitra ny fihetseham-ponao.
Angamba tsy ara-dalàna ny eritreritr'izy ireo, fa rehefa tena manome lanja ilay olon-kafa ianao ao anaty fiarahana dia manandrana mafy indrindra ianao mametraka ny tenanao amin'ny kirarony ary maneho fangorahana kely indraindray.
Mazava ho azy fa tsy tonga mora amin'ny olona sasany izany, fa na dia tsy afaka mamorona izany fifandraisana lalindalina izany aza izy ireo, tokony farafaharatsiny mba afaka mieritreritra ara-tsaina ny amin'ny mety ho fahatsapanao fa nomena ny fihetsik'izy ireo.
11. Tsy mihaino na mamaly ny zavatra ilainao izy ireo.
Samy mila daholo isika rehetra. Zavatra tadiavintsika olon-kafa hatao ho antsika, na hanampy anay farafaharatsiny.
Amin'ny fifandraisana matanjaka mifototra amin'ny fanajana dia samy manandrana manome izay ilain'ny hafa araka izay tratrany ny roa tonta.
Famantarana tsara fa raisina ho tsy misy dikany ianao raha tsy hoe manandrana manome izay ilainao ny mpiara-miasa aminao, fa tsy mandinika akory rehefa manazava ny zavatra ilainao ianao.
Mampiseho izany fa tsy hitan'izy ireo ho zava-dehibe na mendrika hanaovana zavatra ny zavatra ilainao.
Ireo dia mety filàna ara-pientanam-po, filàna azo ampiharina, na filàna ara-batana mihitsy aza.
Angamba tsy manandrana mampionona anao izy ireo rehefa mahatsiaro ho ambany ianao. Na angamba avelany handeha hiverina avy eo amin'ny fiantsonan'ny fiaran-dalamby amin'ny alina izy ireo rehefa afaka mandray anao mora foana.
Ao amin'ny efitrano fandrian, izy ireo dia mety hanizingizina ny toerana izay mety indrindra amin'ny fahafinaretany nefa tsy nieritreritra be loatra raha toa ka mahavita fahafinaretana mitovy amin'izany.
12. Tsy manandrana mahatakatra ny fomba fijerinao izy ireo.
Ny mpivady dia tsy mila miombon-kevitra amin'ny zavatra rehetra amin'ny fotoana rehetra. Ny tsy fitovian'ny hevitra dia tsy midika hoe maty antoka ny fifandraisana ary ny ady hevitra aza dia mety hahasalama amin'ny ambaratonga.
Fa zava-dehibe ny fiezahana handinika ny fomba fijerin'ny olon-tianao, na dia tsy mitovy aza ny hevitrao.
Amin'ny fahatakarana tsara kokoa ny antony mahatonga ny olona hieritreritra na hahatsapa toa azy, dia afaka mahazo marimaritra iraisana mahasalama izay mamela ny roa tonta hahatsapa fahafaham-po fa re izy.
Raha tsy mampiseho fahalianana ny olon-tianao manandrana mijery hoe avy aiza ianao, dia famantarana iray hafa fa tsy manome lanja na manaja ny hevitrao izy ireo.
Mikatsaka ny hisintaka izay tohan-kevitra ezahinao hatao ve izy ireo?
Moa ve izy ireo tsy te hanaiky tsy hanaiky, manizingizina fa marina hatramin'ny farany fofon'aina?
Raha izany dia tsy mahagaga raha tsy mahatsapa ho sarobidy amin'ny vadinao ianao.
13. Tsy mangataka torohevitra aminao velively izy ireo.
Mety tsy hitady ny torohevitrao momba ny olana mahazo azy ny olon-tianao.
Mety ho sahirana irery izy ireo na hangataka amin'ny olon-kafa ny heviny fa tsy ianao.
Mety hitranga izany satria tsy te hiseho ho malemy na tsy mahay izy ireo. Angamba tsy mahazo aina izy ireo amin'ny fahalemena takiana rehefa mangataka fanampiana aminao, ry zareo mpiara-miasa aminy.
Na mety tsy mahita anao ho mitovy fahaizana izy ireo, ary noho izany tsy hitany ny fomba hanampian'ny fangatahana ny hevitrao amin'ny zavatra iray. Rehefa dinihina tokoa, raha afaka mamaky ny vahaolana ianao dia efa nieritreritra an'izany izy ireo.
Mazava ho azy fa tsy fohy na iray monja amin'ny toro-hevitra roa na roa ho anao izy ireo. Tsy mampaninona azy ireo ny mamoaka ny lesona, saingy tsy vonona handray azy ireo izy ireo.
14. Mitsabo ny hafa tsara kokoa noho ny itondrany anao izy ireo.
Tsotra ny mahita fa ny namanao dia mitsabo ny fianakaviany, ny namany, ary na dia ny mpiara-miasa aminy tsaratsara kokoa noho ny itondrany anao aza.
Asehon'izy ireo azy ny fanajana tsy eo amin'ny fiarahanareo.
Mihaino ny hafa izy ireo, manampy azy ireo, maneho ny fankasitrahany, mijery tsara ny zavatra ilainy ary amin'ny fomba tsara kokoa amin'izy ireo.
Ary mety tsy ianao irery no nahita an'io.
Raha milaza ny ahiahin'izy ireo ny namanao sy ny fianakavianao momba ny fomba itondranao azy ireo ho faharoa, dia tokony hisy antony lehibe.
Tsy hiteny ratsy ny sakaizanao izy ireo.
15. Tsy mahatsapa ho ankasitrahana fotsiny ianao.
Misy zavatra ao amin'ny tsinainao milaza aminao fa tsy manome lanja anao ny fomba tianao ny mpiara-miasa aminao.
zavatra hatao rehefa leo sy irery
Matetika, ny fahatsapanao dia mahafantatra fa misy zavatra alohan'ny hamaritan'ny sainao ny olana. Ka raha efa nahatsapa ianao fa misy zavatra somary miala kely amin'ny fiarahanareo, dia mety izany.
Angamba ianao efa nanandrana niresaka momba izany tamin'ny vadinao, fa tsy nisy niova firy.
Raha tsy afaka manetsiketsika ny fahatsapana fa raisina ho zava-poana ianao dia tonga ny fotoana hanaiky fa azo antoka fa izany no izy.
Ny zava-dehibe indrindra tadidio mandritra izany rehetra izany dia manana safidy ianao.
Azonao atao ny misafidy ny hifikitra amin'ny fifandraisanao ary hamoaka ireo olana ireo amin'ny vadinao na azonao atao ny misafidy ny hiala amin'ilay fiarahana.
Mety misy fanazavana marina momba ny lafin-javatra sasany izay efa noresahinay - mety nihena ny fiarahan'izy ireo ara-nofo noho ny adin-tsaina amin'ny asa, na angamba tsy miresaka aminao momba ny zavatra izy ireo satria tsy te-hiahiahy anao, sns.
Ny serasera misokatra sy marina no hany fomba hahitanao izay tena mitranga, ary afaka manapa-kevitra ianao avy eo ny fomba handrosoana any.
Raha be fanahiana na matahotra be ianao hampita ireo karazana olana ireo dia manana olana hafa ianao satria tena tsy salama sy misy poizina ny fifandraisanareo.
Misy foana anefa ny fomba ivelan'ny fifandraisana voafandrika ianao na koa betsaka ny mitaingina azy, toy ny fanambadiana ankizy. Diniho ny hifandraisanao amin'ny iray amin'ireo fikambanana sy fikambanana mpanao asa soa izay afaka manampy.
Ampahatsiahivo ny tenanao fa mendrika fifandraisana salama izay ahatsapanao fa faly sy mahazo aina ianao.
Tsy misy fifandraisana tonga lafatra 100%, na tonga lafatra 100% amin'ny fotoana, fa mendrika hahatsapa ho tiana sy azo antoka ianao.
Raha tsy mahazo an'io amin'ny vadinao ianao dia mila manapa-kevitra raha afaka miasa amin'izany ianao na mila mandroso.
Ho salama tsara ianao, na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana dia mandalo azy, na dia mikorontana aza ny fisarahana, na eo aza ny ranomaso be itomanianao, ary na be aza ny gilasy azonao.
Mahereza ary ataovy izay mahasoa anao.
Tsy azonao antoka ny fomba hanatonana ny namanao momba izany?Tsy mahafinaritra velively ny fahatsapana fa raisina ho azy fa mety hiova ho tsara kokoa ny raharaha. Mila fotoana sy ezaka izany. Mandritra ny fizotrany dia mety hanampy ny manana antoko fahatelo tsy miandany hiresahana, na ianao irery na amin'ny mpivady.Ka mifampiresaha amin'ny Internet amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hiasa amin'izany. Tsotra.
Famantarana 5 amin'ny fifandraisana iray ila (+ Ahoana no hanamboarana azy)
7 dia manamarika ny fijalian'ny lehilahyo amin'ny Peter Pan Syndrome
Fambara 11 Manimba ny fifandraisanao amin'ny fiankinan-doha amin'ny mpiara-miasa aminao (+ Fix 6)
11 Famantarana ny fanahiana amin'ny fifandraisana + Fomba 5 handresena azy
dia grook brooks manambady an'i trisha
raiso ny andraikitrao amin'ny zavatra ataonao manokana
firy taona i chris chan
Famantarana 5 ny mpitondratena iray dia matotra amin'ny fifandraisanareo
rehefa misaraka ny mpivady ary miverina miaraka
ahoana ny fanatrehana ny fiainana
fomba hahitana raha tia anao ny ankizivavy